Hetsika hanoherana ny asan-jiolahy – Toamasina: nilaza tsy hitsitsy amin’ny mpanao ratsy ny zandary - ewa.mg
News - Hetsika hanoherana ny asan-jiolahy – Toamasina: nilaza tsy hitsitsy amin’ny mpanao ratsy ny zandary
Manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ao Toamasina, hanao hetsika lehibe ho fanoherana ny asan-jiolahy ny zandary. Handrakotra ny faritra maro izy ireo, ary nilaza tsy hitsitsy amin’ireo mihevitra mbola hanohy ny asa ratsiny.
“Tsy azo ekena intsony ny zava-misy ka hiakatra eto an-dAenivohitry ny faritra Atsinanana indray ny zandary hanao hetsika hanoherana ny asan-jiolahy. Horakofanay zandary ny renivohitr’i Toamasina manomboka anio (omaly io) ary tsy hitsitsy amin’izay mihevitra ny hanohy ny asa ratsiny ny zandary”, hoy ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovan’ny zandarimaria Atsinanana (tamin’ny fiteny hentitra), ny Kly Ranaivoarison Théodule, omaly nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ao Toamasina. Niangavy fiaraha-miasa manokana amin’ireo sefom-pokontany sy izay manana loharanom-baovao eny anivon’ny fiarahamonina hiara-hiasa amin’ny zandary ity manamboninahitra ambony ity satria araka ny nambarany, “mipetraka eny anivontsika eny ihany ny jiolahy ary eo anelanelan’ny amin’ny 11 ora alina ka hatramin’ny 3 ora maraina ny fotoana fanafihan’ny jiolahy”s.
Miakatra ny tahan’ny tsy fandriampahalemana…
Miaiky ny rehetra fa niakatra izaitsizy ny tahan’ny tsy fandriampahalemana ao an-drenivohitr’i Toamasina raha efa nilamindamina kosa ny manodidina an’i Toamasina II izay nosahanin’ny zandary noho ny fizarana faritra nisy teo amin’ny samy mpitandro filaminana. Efa novatsin’ny fitondrana foibe fiara tsy mataho-dalana ny zandary ka hampiasaina amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany izany, araka ny fanazavan’ny Kly Ranaivoarison Théodule hatrany. Niantso ireo sefom-pokontany rehetra hiaraka hametraka paikady entina hikarohana sy hisamborana ireo jiolahy ny Kly Ranaivoarison Théodule, ny alatsinainy 29 jolay 2019 ho avy izao. Tsy ireo sefom-pokontany ihany no antsoiny fa na izay olona tsara sitrapo vonona ny hiara-hiasa amin’ny zandary, raisina hiaraka hihaona hametraka drafitra matipaika hiadiana amin’ity tsy fandriampahalemana miseholany ao Toamasina ity.
L’article Hetsika hanoherana ny asan-jiolahy – Toamasina: nilaza tsy hitsitsy amin’ny mpanao ratsy ny zandary a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 27/07/2019
Asa mamoafady amin’ny zaza tsy ampy taona: teratany vahiny 16 sy malagasy hanaovana fanadihadiana
Mirongatra tao anatin’ny fotoana vitsy ny fitarainana mahakasika ny herisetra nofo atao amin’ny zaza tsy ampy taona. Voarohirohy ao anatin’izany ny teratany vahiny miisa 16 sy teratany malagasy tamin’ny tranga tao Toliara, herinandro vitsy lasa izay. Araka ny fanadihadiana, alain’ireo teratany malagasy ireo zaza tsy manan-kialofana sy tsy misy mpiahy eny an-dalambe rehefa avy tambazany. Hoentiny any amina toerana mitokana ary efa misy ny fifanarahana ara-potoana amin’ireo teratany vahiny. « Misy amin’ireo teratany vahiny ny mitady ireo ankizivavikely virijiny eo anelanelan’ny 7 sy 8 taona. Hoentiny amin’ny hotely ireo ary vidiany amin’ny vola 25 000Ar », hoy ny fanazavan-dRasolojaona Haingo, filohan’ny vovonana mpiaro ny zaza. Nambarany fa vehivavy malagasy iray ny mpitondra ireo ankizy any amin’ny hotely. Omen’ilay lehilahy malagasy iray zava-mahadomelina ireo zaza mialoha ny anomezana azy amin’ireo teratany vahiny. Taorian’ny fitarainana voaray, nidina ifotony ny Polisim-pirenena. Voasambotra tamin’izany ny lehilahy teratany malagasy iray. Hita ihany koa ny zazavavikely miisa telo mbola tsy ampy taona saika hampihaonina amin’ireo mpitady azy. Taorian’ny fampanoavana ny talata sy alarobia teo, nisy amin’ireo voarohirohy ny nampidirina vonjimaika am-ponja. Mbola mitohy kosa ny fikarohana ireo nahavanon-doza. Henintsoa Hani L’article Asa mamoafady amin’ny zaza tsy ampy taona: teratany vahiny 16 sy malagasy hanaovana fanadihadiana a été récupéré chez Newsmada.
Antenimierampirenena: vao mainka hihamafy ny tsy fahazoana manenjika ireo depiote
Vao mainka ho sarotra enjehina ny depiote ary hahazo laka hatrany ny tsimatimanota ? Tafapetraka sy voafidy, omaly, ny filohan’ny vaomiera eo anivon’ny Antenimierampirenena, hanadihady ny amin’ny tsy tokony hanenjehana sy hanasaziana ny depiote.Mazava ny antom-pijoroan’ity vaomiera ity ary samy resy lahatra ny amin’izany ny ankamaroan’ireo depiote nivory tamin’ny alalan’ny “visioconférence”. Fanohizana sy fanamafisana ny asa nataon’ny teo aloha ny ambentin-tenin’ireo solombavambahoaka tamin’izany. Tafiditra ao anatin’izany sady niadian’izy ireo fo mafy ny tsy hampidirina am-ponja avy hatrany ny depiote, ankoatra ny efa voalazan’ny lalàmpanorenana fa tsy azo enjehina anatin’ny fotoam-pivoriana raha tsy tratra am-bodiomby na koa raha tsy heloka bevava.Handrahonana ny depiote mpanohitraHandalo amin’io vaomiera io ary hodinihin’izy ireo ny hampiatoana ny fitorian’ny olona ny depiote iray. Hofakafakain’izy ireo izany na mitombina na tsia.Etsy an-daniny anefa, mety ahazoan’ireo maro anisa manenjika na koa handrahonana ireo depiote mpanohitra koa izany vaomiera izany, manoloana ny fanehoan-keviny sy ny fitsikeran’izy ireo ny fitondrana.Midika izany fa ahitana tahotra ny fitsarana noho ny tsy fahamarinana mety ataony na koa mety ho fanararaotam-pahefany ireto olom-boafidy ireto.Ny “Raharaha momba ny depiote i Leva”Tranga efa niseho izany, tamin’ny nanavotana na koa niarovan’izy ireo hatramin’ny farany tamin’ny alalan’io vaomiera io ny depiote teo aloha voafidy tany Mahabo, i Leva na efa mazava aza ny didim-pitsarana.Nosaronana tamin’ny alalan’ny fanehoan-kevitra nataon’izy ireo sady fiarovan-tena amin’ny antom-pijoroan’ilay vaomiera ny filazana fa enjehin’ny olom-boatendry sasany izy ireo. Anisan’izany ny governora manao tsinontsinona azy ireo na koa ny mpanatanteraka… Hararaotina hialokalofana izany na mety mitombina aza ? Na izany aza, nanambara ny depiote Voninahitsy Jean Eugene fa tokony hitandrina ihany ireo solombavambahoaka ary tsy hanao fahadisona. “Aoka hanana fahasahiana hiteny ny fahamarinana”, hoy izy.Ady amin’ny tsimatimanotaAraka izany, tokony hanazava antsipiriany amin’ny vahoaka nifidy azy ny momba ity vaomiera ity sy ny vaomiera hafa, indrindra ny misahana ireo raharaha fanenjehena ireo mpitondra ambony ny depiote. Ady amin’ny tsimatimanota rehetra rahateo no atrehina…Tsiahivina fa nofidin’ireo solombavambahoaka miisa 55 amin’ireo 57 ho filohan’io vaomiera io ny depiote voafidy tany Sakaraha, Razakandrainy Dominique. Kandidà tokana avy amin’ny IRD ny tenany ary nisolo ny toeran’ny depiote Rakotomalala Lucien, nodimandry tamin’ny taon-dasa.Synèse R.L’article Antenimierampirenena: vao mainka hihamafy ny tsy fahazoana manenjika ireo depiote a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka, tamin’ny 4 marsa 2021, ny didim-panjakana mamaritra ny fiafaran’ny fe-potoam-piasan’ireo mpikambana ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC), araka ny fampitambaovaon’ny sampanasa misahana ny seraseran’ny Fiadidiana ny Repoblika, omaly. Amin’ ny 12 marsa 2021, mahafeno fito taona katroka ny fanendrena ofisialy azy ireo, no tena daty manapitra an’io fe-potoam-piasana io. L’article Fe-potoam-piasan’ny HCC est apparu en premier sur AoRaha.
Sarona ireo roa lahy nahavanon-doza: maty voafira famaky ilay raim-pianakaviana
Tra–tehaky ny polisy avy ao Betroka, ny alakamisy teo, ireo roa lahy, nahafaty raim-pianakaviana iray, ny alin’ny alarobia teo. Isan’ireo jiolahy ikoizana ireto voasambotra. Ny iray amin’izy ireo, efa nigadra sy nahavita sazy tao amin’ny fonjan’Antanimanga. Ny iray namany kosa, mbola nikasa hamaky tranon’olona hafa ny harivan’ny nahatrarana azy io. Araka izany, tsy tanteraka ny teti-dratsin’ireo jiolahy efa voaomana tao anaty trano fisotroana ao amin’ny fokontany Anjado. Aorian’ny famotorana ireo olon-dratsy, atolotra ny fampanoavana ny raharaha.Tsiahivina fa nitrangana vaky trano tao an-toerana, ny alin’ny alarobia 3 desambra lasa teo. “Nanohitra ireo jiolahy ny raim-pianakaviana ka namoy ny ainy taorian’ny fira famaky nahazo azy”, hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray. Taorian’izay, nisokatra ny famotorana ny tranga. Nisy ny angom-baovao voarain’ny mpitandro filaminana ka nahatrarana ny iray amin’ireo jiolahy. Ity farany kosa, nanondro ny namany mpiray tsikombakomba aminy. Henintsoa HaniL’article Sarona ireo roa lahy nahavanon-doza: maty voafira famaky ilay raim-pianakaviana a été récupéré chez Newsmada.
Razanamalala Hanitra Soa Olga: « Tsy mijanona ny Spaoro na efa manan-janaka aza”
Vehivavy tia fikirizana eo amin’ny fanatanjahantena Razanamalala Olga, antsoina amin’ny anarana hoe Olga, atleta mbola tena tanora eo amin’ny taranja atletisma, saingy efa tena manana ny maha izy raha ny fandresena sy ny medaly volamena azony no isaina. Manan-janaka lahikely, vao 7 taona monja i Olga, Lahiandroy no anaran’io zanany io. Nambarany fa tsy sakana ho azy velively tsy hanao fanatanjahantena ny fananany io zaza io. “Tsy mijanona ny Spaoro na efa manan-janaka aza”, hoy ny nambarany ary afaka miaraka tsara ny fanatanjahantena sy ny asa amin’ny maha renim-pianakaviana. Isan’ny hahazoan-dRazanamalala Olga fahombiazana hatrany, io toe-tsainy io, miampy ny fikirizana izay tena tsy misaraka aminy velively rehefa miatrika fifaninana goavana izy.Tia baolina kitra ihany koa i OlgaAnkoatra ny taranja atletisma, fanatanjahantena ankafizin’i Olga ihany koa ny baolina kitra. Fanatanjahantena samy hafa tanteraka ireo, saingy rehefa hahafahana mikolo ny vatana dia ankafiziny hatrany, araka ny nambarany. Hafatra nomeny ireo tanora mitovy aminy, indrindra, ny tokony hanomezan-danja ny spaoro satria tombony maro no hita ao anatiny. Mi.Raz Ny lalana nodiavin’i Olga (Atletisma)2004: Medaly volamena 3- 400 m(CJSOI Seychelles)2005 : Nandray anjara tamin’ny fiadiana ny tompondaka erantany tany Maraoka2005: Nandray anjara tamin’ny fiadiana ny tompondaka erantany Seniors tany Korea Atsimo2007: Medaly volamena 3- 400 m (JIOI Seychelles)2007-2018: Tompondaka nasionaly – 400 m sy 400 m mihoa-pefy2009: Nanao famaranana tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika tany Kenya2011: Nanao famaranana tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika tany Mozambika2011: Nandray anjara tamin’ny Meeting de Nancy2011: Nandray anjara tamin’ny Meeting de la Réunion2015 : Medaly volamena 2 sy alimo 1 (JIOI La Réunion)2015 : Nanao famaranana tamin’ny Lalao afrikana tany Kongo2019: Medaly volamena 2 sy volafotsy 1 (JIOI Maorisy) L’article Razanamalala Hanitra Soa Olga: « Tsy mijanona ny Spaoro na efa manan-janaka aza” a été récupéré chez Newsmada.
Pilo kely #4673 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4673 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.